Soomaalida dalka Yemen oo xabsiyada lagu gurayo (Maxaa sabab ah?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada ammaanka dalka Yemen, ayaa bilaabay qabqabashada dadka Soomaalida ah iyagoo dabajooga warar horay usoo baxay oo sheegaya in la qabtay nin Somali ah oo doonayey inuu isku qarxiyo Isbitaalka Jamhuuriga ee dalka Yemen ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Sanca.
Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Yemen ayaa beenisay wararka sheegaya in la qabtay nin Soomaali ah oo is miidaamin rabay.
Muumin Cali Geedi oo ka mid ah Odayaasha Somaliyeed ee ku nool Magaalada Sanca, ayaa wuxuu warntii warkaas baahiyey ku eedeeyay inay ka masuul yihiin dhibaatada la soo deristay bulshada Somaliyeed ee ku dhaqan Yemen.
“Marar badan Soomaalida ku nool Yemen ka baahiyeen warar aan jirin, cid kasta oo gacan ka geysan karta, waxaan ka rabnaa inay Maxkamad soo taagto Telefishinada Aljazeera iyo Alcarabiya” Ayuu yiri Muumin Cali Geedi.
Ninkaas Soomaaliga ah ayaa sheegay in Soomaalida lagu qabanyo goobtii lagu arko, “Dadkii wadada ayaa laga qab qabanayaa, basaska ayaa lagala degayaa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya waxaan si xushmad leh uga dalbanayaa inay la xiriirto Safaaradda Yemen ku leedahay Magaalada Muqdisho, kalana hadasho dhibaatada lagu haayo Somalida Yemen.” Ayuu yiri Muumin.
Soomaali badan ayaa ku nool dalka Yemen, kuwaasoo siyaabo kala duwan halkaas u tegay, waxaana jira Soomaali aan badneyn oo ku biiray Alqaacidada Jazeeradda Carabta ee fadhigeedu yahay Yemen.
← Tirada iyo magacyada xubnaha kasoo jeeda degaanada Somaliland ee ku jira xukuumada RW Cumar → Free Speech for All